Qeybta ganacsiga ee ka jawaab celisa fayraska Corona iyo Covid-19
Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa macluumaad ku saabsan taageerada aan siin karno shirkadaha iyo tallaabooyinka aan fulineyno si loo yareeyo saameynta taban ee soo gaari karta qaybta ganacsiga. Maadaama xaaladdu si dhakhso leh ay isu beddeli karto, waxaan kugula talineynaa inaad sidoo kale la socoto warbixinada cusub ee websaydhyada dowladda.
Booqo malmobusiness.com si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo linkiyada hay'adaha dowladda, ururada iskaashiga la leh, iwm, kuwaas oo faa'iido kuu yeelan kara inaad wax ka ogaato.
Adeegga hagitaanka degmada Malmö ee loogu talagalay ganacsiyada, Företagslots waxay xoojiyeen adeegga la-talinta
Waxaan xoojinay Företagslots waxaanna bixinaa tilmaamo iyo macluumaad si looga caawiyo milkiileyaasha ganacsiyada inay ogaadaan talaabooyinka ay qaaday magaalada Malmö. Waxaan sidoo kale cusbooneysiinay xirmooyinka taageerada qaran iyo xulashooyinka kale.
Waxaad la xiriiri kartaa adeeggayaga la tashiga ee la xoojiyay adigoo isticmaalaya taleefanka 040-34 10 00 iyo iimayl ahaan foretagslots@malmo.se.Företagslots waxay furantahay maalmaha shaqada laga bilaabo 08:00 ilaa 17:00.
Tallaabooyinka ay soo saartay magaalada Malmö ee ku aaddan waaxda ganacsiga
Muddada lacag bixinta oo loo soo gaabiyey alaab-qeybiyeyaasha Magaalada Malmö
Hawlgallada ay maamusho magaalada Malmö waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay bixiyaan qaansheegadka alaab-qeybiyeyaasha waqti ka horreeya taariikhda uu ku caddeeyay alaab-qeybiyaha inay tahay taariikhda ugu dambeysa ee lacagta la bixin karo iyo in la xaqiijiyo in dhammaan qaansheegadyada lagu bixiyo 15 maalmood gudahood. Maareynta caafimaadka, daryeelka iyo badqabka waa laga reebay, maadaama ay ku jiraan cadaadis aad u weyn una baahan yihiin inay xooga saaraan kheyraadkooda.
Fursadaha bilaashka ah ee loogu talagalay iibinta la ballaariyey ee ka baxsan dukaanada iyo fursaddaha diyaarinta cuntooyinka loo qaato meel ka baxsan maqaayadaha
Magaalada Malmö waxay soo bandhigeysaa fursadaha iibinta la ballaariyey ee ka baxsan dukaanada iyadoon dukaamada aysan wax lacag ah siinayn degmada. Waxa kale oo suurtagal noqon doonta in la diyaariyo dadka inay cuntada ka qaataan dibedda oo ay geystaan meel ka baxsan maqaayadaha. Maareynta cuntada waa inay la jaan qaaddaa xeerarka khuseeya.
Oggolaansho waa in weli la raadsadaa oo uu bixiyaa booliska.
Sanadka 2020, Magaalada Malmö waxay meesha ka saareysaa khidmadda kiraynta dhulka ee sida caadiga ah dadka looga qaado, tusaale ahaan, meelaha banaanka ah ee cunnooyinka lagu cuno
Golaha degmada ayaa go’aansaday in khidmadaha laga dhaafo dhamaan kirada guryaha, goobaha iibka, dabaqyada banaanka iyo bandhigyada ganacsiga sanadka 2020. Dhammaan dadka haysta rukhsadaha ganacsi ee bixiyay khidmadaha sannadka 2020 dib ayaa loogu soo celin doonaa lacagtooda oo qaansheegadaha aan weli lacagtooda la bixinina waa la tirtiri doonaa.
Dib u dhigista khidmadaha biyaha, wasakhda iyo qashinka
Magaalada Malmö ayaa ka shaqeyneysa sidii loo hubin lahaa in shirkadaha codsanaya muddo dheeraad ah ee la xiriira khidmadaha biyaha, wasakhda iyo qashin ururinta, in la siiyo.
Dib u dhigista khidmadaha la xiriira oggolaanshaha iyo arrimaha kormeerka
Magaalada Malmö ayaa bixin doonta dib u dhigista khidmadaha qaarkood ee la xiriira oggolaanshaha iyo howlaha kormeerka ee Magaalada. Waxaan muujin doonnaa dareen waxaana kordhin doonnaa waqtiyada kama dambaysta ah ee oggolaanshaha iyo kiisaska kormeerka halka ay suurtagal tahay.
Senast ändrad: 2021-04-08 09:49